Kalluumeysato dabeylo ku heleen xeebaha Jubaland oo la la’yahay | KEYDMEDIA ENGLISH
Kalluumeysato dabeylo ku heleen xeebaha Jubaland oo la la’yahay
Dabeylo ku dhuftay Jasiirado dhaca koofurta Soomaaliya, ayaa sababay qasaaro xooggan waxaana la baadi goobayaa todobo kalluumeysato ah oo dabeyluhu la tageen.
KISMAAYO, Soomaaliya - Dadka ku nool jasiiradaha Raas-kambooni, Madhawa iyo Luula ee xeebaha koonfureed ee Soomaaliya, ayaa baadi goobaya todobo ruux oo kalluumeysato ah, kuwaas oo la waayay Talaadadii [25-kii Janaayo 2022] kadib dabeylo xooggan ku dhufatay xeebaha Jasiiradahaas.
Sida ay sheegeen dadka degaanka duufaanta ayaa burburisay ku dhwaad 30 guri, waxaana ku dhaawacmay 12 kalluumaysato ah oo afar ka mid ah ay yihiin haween. Wali xawli ayay ku socota dabeysha daran muddo toddobaad ah, mana jiraan wax caawin ah oo maamulka Jubbaland gaarsiiyay dadka dhiban.
Duufaanta khasaaraha xooggan geysatay ayaa dhacday xilli habeen ah, waxaana burburay ugu yaraan 25 doomood, sida uu sheegay Jeelle oo ka mid jillaabatada ku nool jasiiradda Madhawa, kaas oo hadda muujinaya baqdin hor leh, oo ku aaddan in mar kale dabeyl xooggan ku dhifato xeebaha.
Maalulka Jubbaland, ayuu ugu baaqay, in ay caawiyaan dadka dhibban oo ay ugu daran yihiin todobada kalluumeysada ah ee maqan. “Doonyihii iyo kalluumaysatadiiba waa la la’yahay, ma garanayno inay duufaantu la tagtay iyo inay badda ku haligmeen, waxaan ka codsanaynaa Jubbaland iyo beesha caalamka inay na caawiyaan”. Ayuu yiri Jeelle.
Inta badan saqafka kore ee guryaha ku yaalla tuulooyinka ayaa fiiqmay halka kuwii dhismahoodu qaddiimka ahaa badankoodu dumeen, waxayna dadka degeenku dalbanayaan garab istaag iyo caawinaad deg-deg ah.
Labo bil ka hor qoraal kooban oo kasoo baxay Xarunta Qaran ee ka digista halis wadareedka, ayaa lagu sheegay in laga cabsi qabo in dabelylo xooggan ku dhiftaan degaanno ku yaalla Puntland, oo Caluula, Xaafuun iyo Isku-shuban ka mid yihiin.